Chelsea Oo Guul 3-0 Ka Gaartay Kooxda Tottenham Hotspur, Kulan Uu Ku Fashilmay Lukaka
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo guul 3-0 ka gaartay kooxda Tottenham Hotspur, Kulan uu ku fashilmay Lukaka
September 19, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
kooxda Chelsea ayaa sii wada guulaheeda muhiimka ah iyadoo guul ka gaartay kooxda Tottenham kulan ka tirsan Horyaalka Premier League-ga oo ku soo dhamaaday 0-3.
Xidiga Lukaku ayaa Caawa kulankaan isku arkay isagoo Shabaqa soo taaban xili uu daris la’aa maalmihii ugu danbeeyay.
Blues ayaana daah-furtay goolasheeda Daqiiqadii 49aad ee ciyaarta waxana ka caawiyay Thiago Silva kaasi oo madax la helay kubad koorna aheyd oo uu soo qaaday Marcos Alonso.
N’Golo Kante oo badal ku soo galay kulankan ayaa Chelsea hogaanka u sii dheereeyay Daqiiqadii 57aad isagoo kubad gantaal ah kuna sii dhacday mid kamid ah Daafacyada Tottenham shabaqa ku hubsaday.
Xidiga Antonio Ruediger ayaana soo afjaray Rajada Tottenham ee kulankan isagoo dhamaadka ciyaarta gool u dhaliyay isagoo ka faa’idestay kubad banaanka loo soo dhigay guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-3.
Chelsea ayaa hada hogaanka horyaalka la qabatay kooxda Liverpool oo wada leeyihiin mi 13 dhibcood.
Tottenham XI: Lloris, Son, Kane, Hojbjerg, Alli, Dier, Ndombele, Reguilon, Lo Celso, Romero, Aparecido
Subs: Doherty, Ben Davies, Winks, Sanchez, Gollini, J. Rodon, Skipp, Gil, D. Scarlett
Chelsea XI: Thiago Silva, Azpilicueta, Lukaku, Alonso, Kovacic, Jorginho, Rudiger, Kepa, Christensen, Mount, Havertz
Subs: Saul , M. Bettinelli, Kante, Werner, Ziyech, T. Chalobah, Chilwell, Reece James, Hudson-Odoi